Top 10 Best Video Joiner Apps inuu ku biiro Videos
Top 10 Video Joiner Apps inuu ku biiro Videos wadajir ah
Iyada oo horumar sii kordhaya ee tiknoolajiyada, waxaannu aragnay ayaannu ka awoodaha in android iyo iPhone casriga ah keenay iyaga la. Hadda waa mid aad u fudud si uu u daawado video ah in wax kasta oo ku dhowaad stress qaab lacag la'aan ah iyadoo la isticmaalayo qalab kuwaas oo ka duwan ka hor markii telefoonada gacanta taageeri karaa oo keliya marka 3GP videos. Iyadoo horumarkan, ayaa waxaa loo baahan yahay in aan kala tagno ama ku milmaan videos Foe kala iibsiga fudud iyada oo darbi kuwan. Sidaa darteed ah ee joiners video iyo qalab ku biirtay ayaa cad. Si kastaba ha ahaatee, qalabka uma lihin labada dhufto, si aan u helno android joiners video iyo iPhone video joiners.
Si kastaba ha ahaatee, labada barnaamijyadooda android iyo iPhone si joogto ah barnaamijyadooda yar oo ka yar adag tahay in ay bixiyaan interface Col fudud hawlaha fudud oo dhaqso. Waqtiga hanaanka video xaqiiqo ah waxay ku xirnaan doontaa tirada faylasha video. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah android iyo iPhone video ugu lagula talinaayaa ku biiro in qalab aad laga yaabaa inuu mar walba aad rabto in la isu geeyo labada ama ka badan videos.
5 ka mid ah ugu wanaagsan ee android Video Joiners
Tani waa android video app ku biiro cabsi badan oo heer sare ah ku ool ah. Waxaa ku milmaan karaa 2 video files si ay u sameeyaan file hal waaweyn ee kaliya dhowr ilbiriqsi. Waxa aad bixisaa helaan si degdeg ah u wax videos kaydsan ama aad SD ama in aad xasuusta telefoonada. App Tani taageeri doonto ugu qaabab video ay ka mid yihiin 3GP, MP4, MOV, MPEG sidaas. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtogal ma aha in ay ku milmaan files kala duwan iyadoo la isticmaalayo app this; aad leedahay si ay ugu biiraan laba files waqti.
Androvid waa joiner aad u awood badan video in sidoo kale u dhaqmo sida barnaamij video tafatirka dhammaystir ah. Waxaad si fudud ku milmaan karo files badan hal video file. Waxaad sidoo kale kala jabeen videos, kordhin karo saamaynta, iyo badalo videos iyo fursado kale oo aad u badan iyadoo la isticmaalayo qalab this. Isticmaal app this inuu ku biiro MPEG, 3GP, MP4, AVI iyo qaabab kale file video muuqan.
Tani waa barnaamijka video tafatirka ugu awooda badan android. Waxa ay ku siinaysaa fursado badan halkaas oo aad ka heli ma aha oo kaliya in uu ku biiro videos laakiin sidoo kale ku biiro videos iyo sawiro, daraan music, ka saar qeybo ka mid ah video ah, ka saar watermark, ku dar subtitles badan iyo sidoo kale dar text badan si aad video aad. Waxa ay taageertaa qaabab faylka ugu video sidaasay app aad u wanaagsan samaynaya.
4. Video midoobeen Free
Sida ay magaceeda soo jeedisay, tani waa codsi in uu bixiyaa users android adeeg video laga guurayo oo lacag la'aan ah. Dooro kala duwan video files ka qalab android iyo si fudud iyaga ku milmaan in markii ugu yaraan ay suurtagal tahay. App Tani waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video WMB, MOV, MPEG, AVI iyo MP4. Barnaamijka waxa uu leeyahay interface aad falgal user in wax fudud in aad u shaqeeyaan.
An app video joiner looga cabsado, waayo, android ka dhigaya video ku biiro hawlaha neecaw. Iyada oo ayan jirin xadeynta ama dhaqaalaha loo baahan yahay si ay u shaqeeyaan, waa hufan ee labada users xirfadeed iyo bilowga ah iyo sidoo kale. Waxaa aad u sii deynayso ka adware, spyware ama furin rabshooyin iyo taageero ka heli karto kasta qaab video laga heli karo. Waxaa xitaa caddaynaysaa in la isku halayn karo tan iyo markii aad kaliya ma u hesho in ay ku milmaan files badan, laakiin waxa kale oo aad ku milmaan karo files of qaabab kala duwan.
Anagoo og qalabka laga guurayo android heli karo, aynu eegno joiners video ay taageerayaan casriga ah iPhone ah. Si kastaba ha ahaatee, way wanaagsan tahay in la ogaado in tan iyo barnaamijyadooda tufaax badankiisu kuma soo bilaash ah, waxaad u baahan doontaa in uu bixiyo dollars yar u Chine kuwaas.
Top 5 iPhone Video biirista Apps
1. tufaax iMovie
Tani waa studio a video tafatirka aad wax ku ool ah iyo si sare hufan u iPhone iyo aad u helaan karaa $4.49 oo kaliya. Waxa si fudud jar karo oo isu geeyo dhowr videos, kala guurka, audio iyo sanamyadii ee kaliya dhowr ilbiriqsi. Diyaarso clips aad si kasta oo aad raalli ka hor inta iyaga ku biiraan galay mid ka mid file.
Barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay laba qeybood oo, mid lacag la'aan ah, halkaas oo aad ka heli doontaa xayeysiis in app ama ka mid mushaarka la xayeysiis lahayn. Oo waxaa ka buuxa joog featured video taas oo ka caawisa inay tafatiri videos iyadoo la abuurayo iyo tafatirka filimada, sawiro iyo Cajalado ka iPhone ay. Waxaad isticmaali kartaa video ah editor hidi in lagu daro saameynta, kala guurka iyo sidoo kale music soo jeeda si fudud. Waxa kale oo ay awood u aad ku darto horyaal hor biirtay aad movie.
Si ka duwan barnaamijyadooda ugu soo bixi, vimeo waa goobta internetka ah u saamaxaya in ay geliyaan videos iyo u maareyn online. Haddii video horeba online, uma baahnid inaad si loo soo dejisan oo mar kale geliyaan, aad leedahay si aad u xiriirin vimeo kaliya oo aad ka heli doonaa si fudud loo heli karo. Kale oo ka biirtay videos, waxa kale oo aad ka heli doontaa in aad ku darto kala guurka iyo sidoo kale dar-koob sub.
Tani waa iPhone video app ah tafatirka awood leh in ay tahay arrin caan ah oo ay xawaaraha. Waxay bixisaa adeegyo video laga guurayo wax ku ool ah gudahood ah xadka waqtiga ugu yar. Waxa kale oo aad soo bandhigi kartaa fursad uu ku jar iyo edit aad videos ka hor inta iyaga ku biirtay; sidoo kale waxay bixisaa kala guurka iyo saamaynta kale fanaaniinta.
5. 1aad Video
Waxay u badan tahay in uu yahay Tifaftiraha video ugu awooda badan iPhone madal. Tani waxay sidoo kale waxaa app ugu qaalisan video tafatirka ka dhigaa. Waxa ay u muuqataa sida tafatirka software PC video oo ay taageerto tafatirka audio multitrack. Waxa kaloo ay bixiyaan dadka isticmaala in ay isku daraan Cajalado iyo isu geeyo videos effortlessly. Waxay leedahay saamayn laga cabsado iyo kala guurka in aad si fudud ku dari karaa aad video galay muuqan. Qof kasta oo raadinaya joiner video ah oo bixiya adeegyo badan joiners kale ee caamka ah, tani waa app inuu aado.
Kuwaas si kastaba ha ahaatee ma aha barnaamijyadooda heli karaa oo kaliya in android iyo iPhone video ku biiro dhufto. Waxaad iyaga ka fiirsan kartaa sida Chine ugu talinayaa oo aadka loo qiimeeyo in dadka isticmaala inta badan waxaan imtixaannay oo helay arrin qanco. Waxaad ka heli kartaa barnaamijyadooda android for free on Google Play iyo barnaamijyadooda iPhone ee lacag macquul ah dukaanka Apple.
Haddii aadan u baahan tahay barnaamijyada moobiilllada u soo biiray videos, waxaad isku dayi kartaa barnaamijka tafatirka video ee PC / Mac sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Download version maxkamad free soo socda.
10 Shabakadaha Internetka si aad u daawato Indian Live Television
Sida loo rogo ama MTS Faylal ay la gacan-jabis
Sida loo Play MKV in Windows Media Player
Sida loo Beddelaan FLV in 3GP
Sida loo soo biir RMVB Faylal ay si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Top 10 Video Joiner Apps inuu ku biiro Videos wadajir ah
Copyright © e Wondershare. Dhammaan xuquuq dhowran.